... 9:34:00 PM
ဟုတ်ပဗျာ။ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ အနွေးထွေးဆုံး ဟာ အမေ့အိမ်ပါပဲဗျာ....
ကျွန်မလည်း ကျောင်းပြီးတုန်းက ဒီနိုင်ငံက ဘယ်မှ မခွာဆိုတဲ့ အမျိုးအစားထဲကပဲ။
အဖြူတွေက ဒီလာ အလုပ်လုပ်လည်း ဘာဖြစ်လို့ဒီလို မခံစားရတာလဲ....
သိမ်ငယ်တာကို စိတ်မလုံတာလို့လှည့်သုံးတာလား။
ဘာဖြစ်လို့သိမ်ငယ်ရတာလဲ....ဘာဖြစ်လို့စိတ်မလုံတာလဲ...
2 June 2009 at 11:08 PM
မှန်တယ် မယ်ကိုးရေး အစ်ကိုဆက်ရေးချင်တာက သူများ ဆီမှာလုပ်ရတာချင်း တူပေမယ့် အဖြူတွေ ရဲ့စိတ်ခံစားမှူနဲ. အစ်ကိုတို.နဲ. တခြားစီလေ...
ခံစားပေးနိုင်သော မယ်ကိုးအား ကျေးဇူးပါ.....
မပျော်တာတော့ မပျော်တာအမှန်ပါပဲ ..း(
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာမှတော့ဗျာ။ ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေရတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ နေနိုင်ဖို့က ရွှေတွေရဲ့ မွေးရာပါ တာဝန်တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။
အကိုရေ မလုံရင် ပုဆိုးလေး ခေါင်းမူးချုံလိုက်နော် ဟဲ
3 June 2009 at 5:38 PM
ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် မှန်ပါတယ်
နွေးထွေးမှုမရသလို ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ကို နှိမ်နေလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ အားငယ်တယ်။ မပျော်တာတော့ သေချာတယ်။ စက်ရုပ်ဘ၀တွေပါ
3 June 2009 at 11:02 PM
လုပ်သင့်တာကတော့ အရွယ်ရှိတုန်းမှာ ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး စိတ်လုံခြုံရာ အမေ့အရိပ်ကို ပြန်နေနိုင်ဖို့ပဲ
သင့်ရဲ့ အယူအဆ ကိုထောက်ခံ၏ လိန်လိန်
ခရောင်းလေးလည်း မှန်ကန်စွာ လက်တွေ.ဆန်၏
နေခြည် ရေစက်ရုပ်ဆိုတာ အားသွင်းဖို.လိုတယ် ဟုတ်?
ကိုTaungoo ကောင်းမွန်သော အကြံပါ အားလုံးအတွက်
4 June 2009 at 11:48 AM
တချို့ အဖြူတွေလဲ အဲလို မလုံ့ခြုံစိတ်တွေ ခံစားရတာ တွေ့ဖူး ကြုံဖူးပါတယ်။ ညီမင်းအိမ်ရေ...။
ကိုယ်တို့တွေလဲ လူထဲက လူတွေပဲလေ။
ဆင်းရဲသူ၊ ချမ်းသာသူ အားလုံးက သူ့ အပူနဲ့သူ။
လက်ရှိ အချိန်တွေ အကောင်းဆုံး အသုံးချလို့ မိသားစုအားကိုးရာ အေးမြတဲ့ အိမ်ဖြူလေးတစ်လုံး ဖြစ်နိုင်ပါစေ။ လောက အလှကို ဆင်နိုင်တဲ့ အိမ်ဖြူလေးလဲ ဖြစ်ပါစေဗျား။
အင်း သေချာတာ တစ်ခုကတော့ စိတ်ထဲမှာ ငါ့အိမ်မဟုတ်ပါလားဆိုတာစွဲနေတာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်... ဗမာလူမျိုးတွေဟာ သူများလူမျိုးတွေထက် အိမ်ကို ပိုတွယ်ကြတယ်လို့ ထင်တယ်လေ.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဗမာလူမျိုးတွေမှာ တစ်ခြားလူမျိုးတွေထက် ပိုနွေးထွေးတဲ့အိမ်ရှိတယ်.. ရှိခဲ့ဘူးကြတယ်..အတိအကျပြောရရင် မေတ္တာကို သူများထက်ဦးစားပေးတဲ့ မေတ္တာတရားလွှမ်းခြုံတဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့အိမ်.... အစ်ကိုတောင် အခုအိမ်ကလေးတစ်လုံးကို စိတ်ကူးကောင်းကလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်နေတာပဲ.. ဒီလိုပါပဲ